ILO calls for action to prevent violence and harassment in the workplace | United Nations in Myanmar
ILO calls for action to prevent violence and harassment in the workplace
YANGON (ILO News) – Today, in marking the annual 16 Days of Activism against gender-based violence, the ILO called on Myanmar workplaces to take action to prevent violence and harassment.
ILO Convention 190 on Violence and Harassment came into force on 25 June 2021. It is the first international treaty of its kind to recognise the right of everyone in the workplace to be free from violence and harassment. It also provides the first international definition of violence and harassment in the world of work, including gender-based violence and harassment.
Convention 190 emphasizes that in preventing and eliminating violence and harassment, States must respect, promote, and realize freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining, the elimination of all forms of forced or compulsory labour, the effective abolition of child labour and the elimination of discrimination in employment.
Since the military takeover in Myanmar in February this year, the ILO is increasingly hearing reports of violence and harassment in workplaces. In addition, since the COVID-19 pandemic began last year, reported cases of violence and harassment in the workplace, particularly against women and vulnerable groups, have risen globally.
“Violence and harassment in the workplace can constituteahuman rights violation and harms the health, dignity and wellbeing of everyone at work. It threatens equal opportunities, is unacceptable and incompatible with decent work.​ It is incumbent on everyone to ensure that nobody is subject to intimidation and threats of violence in the workplace. I especially call on employers to take leadership in your workplaces to ensure they are safe places for everyone”- Donglin Li, ILO Liaison Officer/Representative said.
The 16 Days of Activism against gender-based violence is an international campaign that commenced on 25 November—the International Day for the Elimination of Violence against Women. It ends on 10 December, Human Rights Day.
To find out more about ILO Convention 190, follow this link.
ရန်ကုန် (အိုင်အယ်လ်အို သတင်း) - ကျား-မဖြစ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံသည့်အကြမ်းဖက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး နှစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုကို ၁၆ရက်တာ ကျင်းပလေ့ရှိရာ၊ ဤနေ့ကိုအထိမ်းအမှတ်ပြုလျက် အကြမ်းဖက်၊ နှောင့်ယှက်မှုများကိုတားဆီးရန် မြန်မာ့လုပ်ငန်းခွင်များက အရေးယူဆောင်ရွက်ပါမည့်အကြောင်း ILO က ယနေ့ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
ILO ပြဌာန်းချက်အမှတ် ၁၉၀ ဖြစ်သော အကြမ်းဖက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၅ရက် နေ့တွင်အာဏာသက်ဝင်သည်။ ဤစာချုပ်သည် လူအယောက်စီတိုင်းက လုပ်ငန်းခွင်၌ အကြမ်းဖက်မှု၊ နှောင့်ယှက်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိကြောင်းကို အသိအမှတ်ပြုသော နိုင်ငံအချင်းချင်းအကြား သဘောတူကြသည့်ပထမဦးဆုံးသောစာချုပ်ဖြစ်သည်။ ယင်းတွင် ကျား-မဖြစ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည့် အကြမ်းဖက်၊ နှောင့်ယှက်မှု အပါအဝင်၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှု အပေါ်နိုင်ငံတကာက ဖွင့်ဆိုသည့် ပထမဦးဆုံးသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လည်း ပါရှိသည်။
ပြဌာန်းချက်အမှတ် ၁၉၀ ၌ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုကို တားဆီး၍ ပပျောက်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင်၊ နိုင်ငံများသည် အသင်းအဖွဲ့များအားလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်အပြင် စုပေါင်းတောင်းဆိုခွင့်၊ ပုံစံမျိုးစုံဖြင့်အဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းစေမှုနှင့်မလုပ်မနေရအလုပ်ခိုင်းစေမှုပပျောက်ရေးတို့ကိုထိရောက်စွာအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ကလေး အလုပ်သမားခိုင်းစေမှုကိုထိရောက်စွာဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်ခန့်အပ်ရာ၌ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက် ရေးတို့ကို လေးစား၊ အားပေး၊ သဘောပေါက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက် ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုနှစ်အစောပိုင်း ဖေဖော်ဝါရီလ စစ်တပ်က အာဏာလွှဲပြောင်းယူချိန်မှစ၍ လုပ်ငန်းခွင် များ၌ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုများရှိနေကြောင်း တင်ပြအစီရင်ခံတင်ပြသည်များကို ILOက တိုး၍ကြား နေရပါသည်။ ထို့ပြင်၊ ယမန်နှစ် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉ စတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကစ၍၊ လုပ်ငန်းခွင်များ၌ အ ထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့်ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းအားနည်းသည့်အုပ်စုများအပေါ် အကြမ်းဖက်၊ နှောင့်ယှက် သည့်သတင်းများ ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းမြင့်တက်လာလျက်ရှိသည်။
“လုပ်ငန်းခွင်ရှိ အကြမ်းဖက်၊ နှောင့်ယှက်မှုများသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည့် အပြင် လုပ်ငန်းခွင်၌ ရှိသူတိုင်း၏ကျန်းမာရေး၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ယင်းသည် တန်းတူအခွင့်အလမ်းရရှိမှုကိုခြိမ်းခြောက်ကာ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဘဲ၊ သင့်တော်ကောင်းမွန်သည့်အလုပ်အ ကိုင်နှင့်လည်း သဟဇာတ မဖြစ်ပေ။ လုပ်ငန်းခွင်၌ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှခြိမ်းခြောက် မခံရရန်၊ အကြမ်းဖက်ခံရမည်ဟု ကြိမ်းဝါးမခံရကြောင်းသေချာစေရန် လူတိုင်း၌တာဝန်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် အလုပ် ရှင်များအား သင်တို့၏လုပ်ငန်းခွင်များသည် လူတိုင်းအတွက် စိတ်ချရသည့်နေရာဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန် ဦးဆောင်၍လုပ်ဆောင်ရန် ပန်ကြားပါသည်” ဟု ILO ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိ/ကိုယ်စားလှယ် Donglin Li က ပြောကြားသည်။
ကျား-မ ဖြစ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည့်အကြမ်းဖက်မှုကိုဆန့်ကျင်သော ၁၆ရက်တာ ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ရှုားမှု သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်ရေးပွဲ - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု ဆန့်ကျင် ပပျောက်ရေးနေ့ -တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်မှအစပြုကာ၊ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ ဖြစ်သော ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ရက် နေ့တွင်ပြီးဆုံးသည်။
ILO ပြဌာန်းချက်အမှတ် ၁၉၀ အကြောင်းပိုမိုသိလိုပါက ဤ link. တွင်ကြည့်ပါ။
boyda@ilo.org + 95 9446441763